Soo dejisan CuteDJ 4.3.3 – Vessoft
Soo dejisan CuteDJ
CuteDJ – software ah si ay u abuuraan music iyo remixes jawabo kala duwan. CuteDJ furmay fursadaha ballaaran bilowga ah iyo DJ xirfadeed waayo, kii set oo ah saamaynta loo baahan yahay iyo qalab waxaa lagu heli karaa. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay ula audio iyo video files of qaabab kala duwan u shaqeeyaan, iyaga oo isu geeyo galay video clips iyo gubi in cajalladaha. CuteDJ taageertaa xidhiidhka ilaa 8 xukuma hardware oo bixiya si buuxda uga taliso mix music iyada oon of computer ah. CuteDJ san yahay si loogu isticmaalo Idaacado, kooxaha iyo goobaha madadaalada ee kala duwan.
Fursado Wide si ay u abuuraan music
Taageerada tiro badan oo ah qaabab warbaahinta
Alaabtii muusikada iyo saamaynta badan oo
The engine mix awood badan
Taageerada ilaaliyaal hardware
Comments on CuteDJ:
CuteDJ Software la xiriira:
Українська, Français, Español, Deutsch... Virtual DJ 8.2.3456 iyo 7.4.7
العربية, English, Français, Español... Guitar Pro 6.1.8.11683
Editor Audio Software in ay ka shaqeeyaan alaabtii teebabka, dabaysha iyo xarig. Software wuxuu isticmaalaa technology ee codka ugu macquul ah oo alaabta muusikada ah.
Editor Audio software The si ay u abuuraan oo ka arrinsashada music on heer xirfadeed. software waxa uu isticmaalaa technology dhawaaqa sare iyo set oo ah qalab dalwaddii.
Editor Audio Editor ayaa awood leh ee files audio ka mid ah qaabab kala duwan. Software ka kooban yahay tiro badan oo ah qalab reserved kuwan raadkaygay dhawaaqa iyo wax soo saar leh loo maqli karo ee files.
Editor Audio software The awood leh si ay u abuuraan music iyo keegag kala duwan. software wuxuu taageeraa spectrum balaadhan oo ah qalabka iyo saamaynta for DJing xirfadeed.
Horumarinta Tafatirka Text The editor text functional. software waa ay awoodaan in ay qabtaan hawlaha aasaasiga ah ee editor ah iyo astaysto hab u hawlgasho afka barnaamij gaar ah ah.
Extensions Software in la soo dejisan iyo casriyeyn badeecada ka Adobe. Sidoo kale software soo bandhigayaa warbixin ku faahfaahsan oo ku saabsan codsiyada la heli karo si ay u soo bixi.
English, Français, Español, Deutsch... MSI Afterburner 4.2.0.7826
English, Українська, Français, Español... ComboFix 16.10.23.1